शास्त्रअनुसार कुन बार के काम गर्दा लाभैलाभ मिल्छ ? जान्नुहोस् – Sanjal Nepal
Homeसमाचारशास्त्रअनुसार कुन बार के काम गर्दा लाभैलाभ मिल्छ ? जान्नुहोस्
December 6, 2020 admin समाचार 4238
तपाई कुनै पनि काम गर्दै हुनुन्छ भने दिन, बार, नक्षेत्र सवै मिलाएर गर्नु उपयुक्त मानिन्छ । हिन्दुधर्म शास्त्रका विभिन्न धर्म ग्रन्थ र वास्तु शास्त्रले कुनै कामको शुभ फल र लाभका लागि केही त्यसको विधि अपनाउनुपर्ने जनाउँछ । तपाईले बार र समयलाई ख्याल गरेर काम गर्दा फाइदा पुग्ने शास्त्रले बताउँछ ।
कुनबार के काम गर्दा फाइदा ?
त्यसैगरी सोमबारका दिन शास्त्रले यज्ञ गर्नु गराउनु उपयुक्त मान्दछ । गार्इ–भैसी, घोडा, फूल, घास, वृक्ष्य, मोति, चाँदी आदिको किनबेच गर्नु, स्त्रीको संगत गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।
अनै’कतिक काम गर्न, शास्त्रबर्धन, संग्राम, कपट, दम्भ, सैन्य राख्नु , सुबर्ण ,धातु , मुगा ,रक्ता’श्राव कार्य गर्नु शुभ मानिन्छ।
वुधबारः यस बारमा चातुर्य, दक्षता, पुण्य आर्जन , अध्ययन गर्नु , शास्त्रसेवा गर्नु , शास्त्र चिन्तन गर्नु , चित्र लेखन गर्नु, वास्तु कला , नोकरी गर्नु, शुभ मानिन्छ ,
शुक्रबारः यस बारमा मणि, रत्न , हिरा , सुगन्ध, बस्त्र, उत्साह, अलंकार, बाणिज्य , व्यापार , गाइ–वस्तु किनबेच गर्नु , द्रव्य भण्डारण गर्नु र संचय गर्नु तथा कृषि कार्य शुभ मानिन्छ।
शनिबारः यसबारमा झुटो बोल्नु, क’पट गर्नु , गृह–प्रवेश , स्थिर कार्य , नोकरी गर्नु , कलकारखाना खोल्नु , फलाम , तरवार आदिको कार्य गर्नु शुभ मानिन्छ।
February 9, 2021 admin समाचार 2221
November 2, 2020 admin समाचार 4543
December 5, 2020 admin समाचार 1681